ID ကို VKONTAKTE ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို - VKONTAKTE - 2019
Black နဲ့အဖြူဓာတ်ပုံကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျက်သရေနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရှိပါတယ်။ အတော်များများကကျော်ကြားဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့အလေ့အကျင့်အတွက်အသုံးပြုပါ။
ဓါတ်ပုံများမိကျောင်းမဟုတ်သည်အထိငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူသော်လည်း, ငါတို့သည်လည်းကြီးမြတ်အဖြူအနက်ရောင်-and ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ချောအရောင်ဓာတ်ပုံတွေပေါ်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကထု Display ရဲ့အရောင်များချိန်ညှိရန်ခွင့်ပြုသည်ကြောင့်သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းအများစုလိုလားသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတည်းဖြတ်ရေးအပြင်ဖြစ်ပါသည် Non-ဖျက်ဆီး (non-အဖျက်), သည်, မူရင်းရုပ်ပုံဆိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့သင့်လျော်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ပါနဲ့ Photoshop ထဲမှာဖွင့်လှစ်။
ထို့နောက်ဓာတ်ပုံ (ကပျက်ကွက်စမ်းသပ်မှု၏အမှု၌ backup တစ်ခုရှိသည်) နှင့်အတူအလွှာပွား။ ရုံသက်ဆိုင်ရာ icon ပေါ်တွင်အလွှာ overtighten ။
ထိုသို့သောအားဖြင့်ငယ်ရုပ်ပုံလွှာပေါ့ခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်လည်း shaded ဒေသများထဲက "ဆွဲ" ပုံရိပ်မှာသည်အတိုင်း, ကွေး Bends ။
ယခုတွင်သင်သည် Discoloration အရောင်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ Photoshop မှာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်စေရန်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဓာတ်ပုံကိုညှိနှိုင်းမှုအလွှာအပေါ်စည်းကြပ် "Black နဲ့အဖြူ".
ဒီနေရာတွင် Slider ကိုအရိပ်အမည်များနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအရောင်များမူရင်းဓာတ်ပုံများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ အဓိကအရာက overdo သည်မဟုတ်။ သင်တန်း၏, ဒါရည်ရွယ်ဘဲ, မဟုတ်လျှင်, overexposed နှင့်အပြန်အလှန်လွန်းမှောင်မိုက်ဒေသများမထားပါနဲ့။
ဓာတ်ပုံထဲတွင်ကှာခွားခထပ်မံမြှင့်တင်ရန်။ ဒီညှိနှိုင်းမှုအလွှာလျှောက်ထားရန် "Levels နဲ့" (အခြားကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်သုံးစွဲမှုကို) ။
slider မှောင်မိုက်ဒေသများမိုက်နှင့်အလင်းပေါ့။ ပတ်နှင့်အလွန်အကျွံမိုက်အကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
ရလဒ်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်ဆနျ့ကငျြဘယ့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူးအောင်မြင်ရန်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်။ ဆံပင်မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်ထင်ရှား။ ,
အခြားအလွှာ၏အကူအညီနှင့်အတူက fix "Curves"။ မှောင်မိုက်အစွန်းအထင်းသွားပြီနှင့်ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံပြလိမ့်မည်မဟုတ်အထိပေါ့ဆီသို့လက်ကိုင် Pull ။
ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာဆံပင်ပေါ်ကျန်ရစ်ရပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အနက်ရောင်နှင့်အတူ Curves အလွှာမျက်နှာဖုံးဖြည့်ပါ။
ထိုအခါ key combination ကိုနှိပ် ALT + DEL။ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးအရောင်ကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
ထို့နောက်တစ်ဦးဖြီးယူနှင့်က configure ။ အဆိုပါဖြီး၏အနားပျော့ဖြစ်သင့်, တောင့်တင်း - 0%, resolution ကို - နှစ်သက်အဖြစ် (ထိုပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ )
ယခုငါတို့ထိပ် panel ကိုပြောင်းရွှေ့ခန့် 50% opacity ကိုနဲ့ဖိအားထားကြ၏။
brush အရောင် - အဖြူ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ညှိဖြီးအဖြူရောင်ဆံပင်ပုံစံဟာခါးဆစ်ကနေ layer ကိုထုတ်ဖော်, လွန်နေကြသည်။ ဒါ့အပြင်အနည်းငယ်သူတို့ကိုပိုပြီးဖော်ပြအောင်, မျက်စိပေါ့။
ကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့, မော်ဒယ်အပိုငျးအများ၏မျက်နှာပေါ်မှာအဖြစ်မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်ထင်ရှား။ , အောက်ပါနည်းလမ်းကကူညီကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ် Get ။
စာနယ်ဇင်းများ Ctrl + Alt + Shift + E ကို, ဖြင့်အလွှာတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံမိတ္တူကိုဖန်ဆင်း၏။ ထိုအခါအလွှာ၏အခြားမိတ္တူဖန်တီးပါ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ filter ကိုအပေါ်ဆုံးအလွှာလျှောက်ထား "မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစေခြင်း".
slider ချောမွေ့အရေပြားတူညီနေမှု, ဒါပေမယ့်မပိုအောင်မြင်ရန်။ "ဆပ်ပြာ" ကျနော်တို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါ filter ကို Apply နှင့်ဤရန်အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးအလွှာထည့်ပါ။ အဓိကအရောင်, အနက်ရောင်ကိုရှေးခယျြကိုင် ALT နှင့်စခရင်ပုံပေါ်အဖြစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အခုတော့အရေပြားပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားအရပ်တွင်အဖြူဖြီးမျက်နှာဖုံးဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့မျက်နှာ, နှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်, နှုတ်ခမ်း, မျက်ခုံး, မျက်လုံးနဲ့ဆံပင်၏အခြေခံကောက်ကြောင်းမထိဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။
နောက်တဖန်, စာနယ်ဇင်း Ctrl + Alt + Shift + E ကိုတစ်ဦးပေါင်းစပ်မိတ္တူ Creating ။ ထိုအခါ filter ကို apply "အရောင် Contrast".
slider ပုံထဲကဒဏ်ငွေအသေးစိတ်ကို၏ display ကိုအောင်မြင်ရန်။
Filter ကို Apply နှင့်ဤအလွှာများအတွက် blending mode ကိုပြောင်းလဲစေ "ထပ်".
Photoshop မှာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓါတ်ပုံများ၏ဖန်တီးမှုမှာပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် Photoshop မှာ image ကို desaturate ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။
ဗီဒီယို Watch: МАККУИН Учим буквы и слова. Развивающие игры для детей. Киндер Сюрприз (စက်တင်ဘာလ 2019).